ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြား ဖောလဈအကျစဈဓာတျ (Folic Acid)ဘာကွောငျ့လိုအပျသလဲ?
အမြိုးသမီးတဈဦးကိုယျဝနျဆောငျပွီဆိုရငျ သကျဆိုငျရာကနျြးမာရေးဌာနမြားကိုပွသကွတဲ့အခါ သံဓာတျအားဆေးနဲ့ဖောလဈအကျစဈကိုပေးတတျကွပါတယျ။ ဒါဟာမိခငျလောငျးအတှကျရော ဝမျးကွာတိုကျထဲက ရငျသှေးလေးအတှကျပါ ရောဂါမရအောငျကာကှယျတဲ့အနနေဲ့ပေးခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ဖောလဈအကျစဈဓာတျဟာ မိခငျလောငျးတဈဦးအတှကျဘာကွောငျ့ ဒီလောကျထိအရေးပါနလေဲဆိုတာ လလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျ။
ဖောလဈအကျစဈဓာတျခြို့တဲ့ တဲ့အခါ မိခငျဝမျးဗိုကျထဲမှာရှိနတေဲ့ကလေးငယျဟာ ဦးနှောကျနှငျ့ကြောရိုးအာရုံကွောမပွှနျကွီးဖှဲ့စညျးပုံခြို့ယှငျးမှု (neural tube defect) နဲ့ မှေးရာပါဦးခေါငျးခှံမပါခွငျး (Anencephaly)ရောဂါမြားဖွဈပှားနိုငျပါတယျ။ ဒီရောဂါတှရှေိနဲ့ကလေးငယျဟာ အသကျရှငျရနျရာခိုငျနှုနျးအလှနျနညျးပါတယျ။ ဦးနှောကျနဲ့အာရုံကြောမဟာ ကိုယျဝနျသန်ဓလေေးပတျမွောကျမှာ ဖှဲ့စညျးပုံကိုအပွီးသတျဆောငျရှကျတာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ဖောလဈအကျစဈကို ကိုယျဝနျဆောငျရနျစတငျကွိုးပမျးခြိနျကစပွီး (သို့မဟုတျ)ကိုယျဝနျရှိနိုငျပွီဆိုတဲ့အခြိနျကစပွီး သောကျခိုငျးတာဖွဈပါတယျ။
ဖောလဈအကျစဈဟာ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြား သှေးတိုးကာကိုယျဝနျဆိပျတကျခွငျး (preeclampsia)ဖွဈနိုငျခကြေိုလြော့ကစြတေယျလို့ စဈတမျးမြားကဆိုပါတယျ။ ဖောလဈအကျစဈဟာ သှေးနီဥဖှဲ့စဉျးမှုမှာလညျးပါဝငျတဲ့အတှကျ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ သှေးအားနညျးခွငျးကိုလဲ တဈစိတျတဈပိုငျးကာကှယျပေးပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတဈယောကျအတှကျ တဈနတေ့ာပမျြးမြှ ဖောလဈအကျစဈလိုအပျမှုဟာ ၄၀၀ မိုကျကရိုဂရမျ (400micrograms) ရှိပါတယျ။ ဒီပမာဏရဖို့ဆိုရငျ ကနျြးမာရေးဌာနကပေးတဲ့ဆေးသောကျမယျဆိုရငျ လုံလောကျပါတယျ။ ဖောလဈအကျစဈဟာ ဂြုံ၊ဆနျ၊ ထောပတျသီး၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားမှာလညျးပါဝငျတဲ့အတှကျ ဖောလဈအကျစဈခြို့တဲ့ရငျ ဒီအစားအစာတှကေိုစားသုံးပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အိမျထောငျသညျအမြိုးသမီးတို့ ကိုယျဝနျယူဖို့စိတျကူးရှိပွီဆိုရငျ ဝမျးတှငျးသန်ဓမေတညျခငျ စတငျကိုယျဝနျဆောငျရနျ စိတျကူးရှိတဲ့အခြိနျကစလို့ ဖောလဈအကျစဈကိုသောကျသငျ့ပါတယျလို့ အကွံပွုရငျး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ဖောလစ်အက်စစ်ဓာတ် (Folic Acid)ဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲ?
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနများကိုပြသကြတဲ့အခါ သံဓာတ်အားဆေးနဲ့ဖောလစ်အက်စစ်ကိုပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာမိခင်လောင်းအတွက်ရော ဝမ်းကြာတိုက်ထဲက ရင်သွေးလေးအတွက်ပါ ရောဂါမရအောင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဖောလစ်အက်စစ်ဓာတ်ဟာ မိခင်လောင်းတစ်ဦးအတွက်ဘာကြောင့် ဒီလောက်ထိအရေးပါနေလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ဖောလစ်အက်စစ်ဓာတ်ချို့တဲ့ တဲ့အခါ မိခင်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးငယ်ဟာ ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးအာရုံကြောမပြွန်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံချို့ယွင်းမှု (neural tube defect) နဲ့ မွေးရာပါဦးခေါင်းခွံမပါခြင်း (Anencephaly)ရောဂါများဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီရောဂါတွေရှိနဲ့ကလေးငယ်ဟာ အသက်ရှင်ရန်ရာခိုင်နှုန်းအလွန်နည်းပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကျောမဟာ ကိုယ်ဝန်သန္ဓေလေးပတ်မြောက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံကိုအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဖောလစ်အက်စစ်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်စတင်ကြိုးပမ်းချိန်ကစပြီး (သို့မဟုတ်)ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစပြီး သောက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖောလစ်အက်စစ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ သွေးတိုးကာကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်း (preeclampsia)ဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့ကျစေတယ်လို့ စစ်တမ်းများကဆိုပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်ဟာ သွေးနီဥဖွဲ့စဉ်းမှုမှာလည်းပါဝင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သွေးအားနည်းခြင်းကိုလဲ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာပျမ်းမျှ ဖောလစ်အက်စစ်လိုအပ်မှုဟာ ၄၀၀ မိုက်ကရိုဂရမ် (400micrograms) ရှိပါတယ်။ ဒီပမာဏရဖို့ဆိုရင် ကျန်းမာရေးဌာနကပေးတဲ့ဆေးသောက်မယ်ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်ဟာ ဂျုံ၊ဆန်၊ ထောပတ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာလည်းပါဝင်တဲ့အတွက် ဖောလစ်အက်စစ်ချို့တဲ့ရင် ဒီအစားအစာတွေကိုစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးတို့ ကိုယ်ဝန်ယူဖို့စိတ်ကူးရှိပြီဆိုရင် ဝမ်းတွင်းသန္ဓေမတည်ခင် စတင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် စိတ်ကူးရှိတဲ့အချိန်ကစလို့ ဖောလစ်အက်စစ်ကိုသောက်သင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုရင်း။